My freedom: သူငယ်ချင်း
လူတယောက်ရဲ့ အပြုအမူအနေအထိုင် တစိတ်တပိုင်းကို သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေက လွှမ်းမိုးထားတယ်ဆို ယုံမလား???
စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ့်ဘာသာတယောက်တည်းဆို မလုပ်နိုင်တဲ့/လုပ်ဖို့အလားအလာနည်းတဲ့ ကိစ္စတချို့ကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဆို လုပ်မိသွားတတ်တယ်။ ဥပမာ- Club သွားဖို့ အဖော်ညှိတာမျိုး၊ ဘီယာအရက်သောက်ရင်တောင် လူများရင် ပိုသောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်
ဘာမဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေမိတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သတိထားမိလား? တချို့သူငယ်ချင်းတွေက မလိုအပ်ဘဲ တချိန်လုံးအပြင်သွားတယ်။ သူတို့သွားတိုင်းလည်း ကိုယ့်ကိုခေါ်တော့ မလိုက်ချင်လိုက်ချင် လိုက်နေရတတ်တယ်။ သူတို့ကြောင့် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်၊ ပိုက်ဆံ စသဖြင့် အကုန်အကျတွေ များနေတတ်တယ်။ တခါတလေ စိတ်ထွက်ပေါက်တခုအနေနဲ့ သွားတာကို မဆိုလိုဘူးနော်။ အမြဲလိုလို အပျော်အပါးဘက်လိုက်နေတာကို ပြောချင်တာ။
ဒီနေရာမှာ အသိစိတ်ဓာတ်က အရမ်းအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာ ပါလာပြီ။ အသိနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ခွဲပြောချင်တယ်။
(၁) ကိုယ်လုပ်နေတာတွေ မှန်မမှန် ပြန်ဆန်းစစ်မယ်ဆိုတဲ့ အသိတခုရှိလား?? မှားနေတယ်ဆိုရင် ဒါမှားနေတယ်ဆိုတာ သိပြီလား??
(၂) တွေ့တဲ့အမှားကိုပြင်ဖို့ရော စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရဲ့လား??
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိသင့်တယ်။ ကိုယ့်အမှားကို မမြင်ဘူး မသိဘူးဆို အဲ့နေရာမှာတင် ပြီးနေပြီ။ ပြင်မှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်နေထိုင်နေတဲ့ပုံစံက အဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့လားဆိုတာ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါလား။ ငါအပျော်အပါးတွေ အရမ်းများနေလား? ဒီသူငယ်ချင်းတွေက ငါ့ကိုဖျက်ဆီးနေတာလား? သူတို့နဲ့ မလိုအပ်ဘဲ အချိန်တွေ ဖြုန်းနေမိလား?
အဖြေရပြီဆို စိတ်ဓာတ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ပြင်ဆင်ပါ။ သူတို့ကို ရှောင်သင့်ရင် ရှောင်လိုက်ပါ။ ဆိုလိုတာက ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် အဲ့ဒါမျိုး ဘာမဟုတ်တာတွေနဲ့ အချိန်မကုန်စေဖို့ ထိန်းသိမ်းပါ။ ဒီလိုလုပ်လို့ သူငယ်ချင်းတွေက မုန်းသွားမှာပဲဆိုတာမျိုး တွေးနေရင်တော့ နွံလိုပဲ နစ်သထက်နစ်လိမ့်မယ်။
တချို့လူတွေက သူငယ်ချင်းအပေါ် အရမ်းမှီခိုတယ်။ သူဒါလုပ်ဆို လုပ်တယ်။ သူဒါမလုပ်နဲ့ဆို မလုပ်ဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ အဲ့လိုလမ်းညွှန်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေက သူတို့အပေါ် အရမ်းလွှမ်းမိုးလာတတ်တယ်။ မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ ၀င်စွတ်ဖက်လာတတ်တယ်။ တကယ်တော့ ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမှ မမှီခိုတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ သူငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ အခြေအနေတရပ်ကို ဒီလိုလုပ်ရင် ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ဒါတွေရမယ်.. အဲ့လိုမျိုးပဲ အကြံပေးသင့်တယ်။ ဒါကိုပဲ လုပ်.. ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး။ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုဟာ ကိုယ်ချတာပဲ ဖြစ်သင့်တယ်။ သူငယ်ချင်းက ဒါလုပ်ဆိုလို့ လုပ်တာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး။
သူငယ်ချင်းဆိုတာ ပေါင်းတတ်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့မူလစိတ်နဲ့ အပြုအမူအကျင့်စရိုက်ကို တသမတ်တည်းထားနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ခပ်မာမာရှိဖို့လိုတယ်။ အပေါင်းအသင်းကြောင့် ပျက်စီးတယ်ဆိုတာ စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့တဲ့သူတွေအတွက်တော့ မှန်မယ်ထင်တယ်။ ကိုယ့်စိတ်က ခိုင်တယ် ပြတ်သားတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုသူငယ်ချင်းမျိုးပေါင်းပေါင်း ကြိုက်တဲ့လူနဲ့ ပေါင်းလို့ရတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကို သူတို့မလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးလေ။ အဲ့ဒါ အရေးကြီးဆုံးပဲ :D
ဒီမှာ ကန်ဒီအဓိကပြောချင်တာ သူငယ်ချင်းရွေးပေါင်းဖို့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် နိုင်စေချင်တာ။ မကောင်းမှန်းသိရင် ပြင်ရဲတဲ့သတ္တိရှိစေချင်တာ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ မှီခိုတတ်တဲ့အကျင့် ရှိစေချင်တာ။ ကန်ဒီ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့နေရတာတွေက ကန်ဒီ့အတွက် စာတပုဒ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ ဒီပိုစ့်လေးလည်း ထိုနည်း၎င်းပဲ ^_^
ဟုတ်တယ် အရက်သောက်တတ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းနေရင် ကိုယ်လဲ နဲနဲ တော့သောက်မိတာပဲ
အကောင်းဆုံးကတော့ သူများကိုလဲ မလွှမ်းမိုးနဲ့
ကိုယ့်ကို လာပြီးလွှမ်းမိုးရင်လဲ ရှောင်ထွက်လိုက်
တခါတလေ အဲလိုလေးတွေရေးတာ ကောင်းတယ် ကန်ဒီရေ
သိပ်ကောင်းတဲ့စာပဲကလေးလေးရေ...။ သူငယ်ချင်းတွေထဲက ရှောင်သင့်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို အများကြီးတွေ့ကြုံခဲ့ဖူးတယ်...ကိုယ့်စိတ်ကိုနိုင်ပြီး အလွှမ်းမိုးမခံခဲ့ဘူး...။သူများကိုလဲ လွှမ်းမိုးရတာမကြိုက်ဘူး.....။
မကြီးလွမ်းတော့ သူများဘယ်လောက်တိုက်တိုက် အားမနာ တတ်ဘူး..ဘူးဆိုဘူးဘဲ.. အဟဲ..ဗဟုသုတ ရတဲ့စာလေးဖတ်ရတော့ အားရှိသွားတယ်..အဓိက ကန်ဒီပြောသလို ကိုယ်သာ အရေးကြီးဆုံးပါ။ ညီမလေးလည်း နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်း ကျန်းမာခြင်း လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝပါစေ
ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ... ကျွန်တော် ၁၀တန်းတုန်းကဆို ဂိမ်းကြီးပဲ ဘော်ဒါတွေနဲ့ ဆော့နေလို့ အိမ်က အမေ လိုက်ဖမ်းတာ မှတ်မိသေးတယ်။ လူစုံလို့ကတော့ ပျောက်တာပဲ... ကံကောင်းတာကတော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး စိတ်တူကိုယ်တူများကြတာပါ။ တက္ကသိုလ်တုန်းကလဲ ပွေးကြရင် တူတူပွေးပြီး တစ်ကယ် အင်တိုက်အားတိုက်လုပ်ချိန်ကြရင် တူတူလုပ်၊ မခိုမကပ်ပဲ အပြန်အလှန် စာရှင်းပြကြနဲ့ ပျော်စရာတော့ အကောင်းသား။ ကိုယ်နဲ့ အစီးမကပ်တဲ့၊ စိတ်မတူတဲ့လူမျိုးကြတော့လဲ မေး၊ထူး၊ ခေါ်၊ပြောလောက်ပဲ။ အန်းနီးဝေး... ဒီပို့စ်လေးကြိုက်တယ် ....
မှန်တာပေါ့ ချိုချဉ်လေးရယ်။ မိမိကိုယ်ကို မထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အားနည်းချက်ကို ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အပြစ်ပုံချလို့ မရဘူးလေကွယ်။ မည်သူမပြုမိမိမှုပေါ့နော်။
မှန်လိုက်တဲ့ အတွေးတွေပါပဲ။။။သူငယ်ချင်းဆိုတာ ကောင်းတဲ့သူရှိသလို
မကောင်းတဲ့သူလဲ များသားနော်။အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို အပြစ်ပုံမချတာကောင်းပါတယ်
ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းပေါင်း၊ အကျင့်ဆိုတာတော့ ကူးစက်တတ်မြဲ။ ဘယ်သူမှလည်း မရှိရော၊ ဘာမှကို မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ :D
ကန်ဒီရေးတာ ထောက်ခံတယ်.. အဲဒါကြောင့် ပြောကြတာပေါ့..Be yourself, It's enough ဆိုပြီးတော့လေ :)
ဟုတ်တယ်နော်.. အဓိက ကကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ထိန်းနိုင်ဖို့ဘဲလိုတယ်..
စကားမစပ် မြတ်ကြည်လေးမန့်ထားတာသဘောကျတယ်း)
အဓိကက စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာဖို့ပါဘဲ....စိတ်ဓါတ်မခိုင်မာရင် ကို့အပေါ်လွှမ်းမိုးချင်တဲ့သူတွေက လွှမ်းမိုးလာမယ်.....ကောင်းတဲ့သူဆို တော်သေး....မကောင်းတဲ့လူဆို ကိုပါရောပြီးပျက်စီးမှာနော်.........သူငယ်ချင်းဆိုတာ ရှိတော့ရှိရမယ်ထင်တယ် ကန်ဒီရေ.......
နာတို့ကတော့ သူငယ်ချင်းဆို အရမ်းမက်တာ ဟာသလုပ်တက်တဲ့ သူငယ်ချင်းဆို အရမ်းခင်တယ်...ကျောင်းတုန်းကလည်း သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး သူများတွေလိုက်စလို့ ရုံးခန်းရောက်တာ အကြိမ်ပေါင်းမနည်း...နာ့အထင်တော့ ဘယ်လိုသူငယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းပေါင်း အဓိကတော့ စိတ် (သိုး..မဟုတ်ပါ) ...ကိုယ့်စိတ်မခိုင်ရင်တော့...သွားရေား...
တချို့လူတွေက သူငယ်ချင်းအပေါ် အရမ်းမှီခိုတယ်။ သူဒါလုပ်ဆို လုပ်တယ်။ သူဒါမလုပ်နဲ့ဆို မလုပ်ဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ အဲ့လိုလမ်းညွှန်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေက သူတို့အပေါ် အရမ်းလွှမ်းမိုးလာတတ်တယ်။
ထောက်ခံတယ် အစ်မ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံဖူးတယ်။ အတွေးလေးတွေ လှတယ်။ သဘောကျတယ်။
ရေးတာပဲ ဒါပေမဲ့ ဖတ်လို့မချောပဲ အချစ်
မာန် ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့် post လေးမှာပေါ့
အခုတော့ ချိုချဉ်က ကျွန်တော် ရေးချင်ဖတ်ချင်
စိတ်ရှိတဲ့ ဒီလို post လေးကို ရေးပေးလိုက်တဲ့